जेठ (९३) – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > प्रकाशन > २०७७ > जेठ (९३)
समीक्षा : ‘कोमामा आमा’ को सूत्र–पथभित्र हराउँदा / रमेशजङ्ग थापा
July 3, 2020 जेठ (९३), समालोचना
साहित्यमा सूत्र–लेखनप्रणाली साह्रै कठिन मानिन्छ । वेद, उपनिषद्, एवं संस्कृत व्याकरणका केही नियमहरू सूत्र–सूक्तढङ्गबाट लेखिएका छन् । यस दुरुहताको कारणले होला नेपाली साहित्यिक शब्दपथमा सूत्रात्मक लेखनको अनुयायी स्रष्टा अंगुलगण्य रहन गएको सर्वविदितRead More…
समालोचना : विपीको शत्रु कथाको विश्लेषण / ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली
१. परिचय शत्रु कथा सूर्यविक्रम ज्ञवालीद्वारा सम्पादित कथा कुसुम (१९९५) मा सङ्कलित एक उत्कृष्ट कथा हो । कोइरालाले यस कथामा समाजमा जस्तोसुकै असल वा सम्पन्न व्यक्ति भए पनि ऊ अजात शत्रु हुन Read More…
समालोचना : लघुकथाहरूको सँगालो – दाउ / प्रा. गोपीकृष्ण शर्मा
लघुकथा कथाकै छोटो छरितो रूप हो । लघुकथामा पनि कथाका तत्वहरू रहेका हुन्छन् तर सङ्केत रूपमा । लघुकथा चाहिँ कथाको आयामको सापेक्षतामा आकारको सानो हुन्छ । तर आकारगत न्यूनता मात्र लघुकथाको पहिचानRead More…
कथा : शून्यता लक्ष्मण / वियोगी
July 3, 2020 कथा, जेठ (९३)
“गाम त खत्तमै पा¥यो ! के–के ग¥यो के–के ? रगतमा फागू खेल्दै छ मुर्दारहरू !” चौतारामा एक्लै झोक्राइरहेका जम्दार बिर्खसिंह गुरुङको बोली मेरो कानमा बिझ्यो । टक्क रोकिएँ । र, उनीतिर खुट्टाRead More…
आमाले जे सोच्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा हुन्छ । सायद हामी दुईका दिमागबीचमा एउटा तार जोडिएको होला । कुन्नि कहिलेदेखि हो याद छैन, मैले आमाले अनेक कुराहरू सम्झेको, नदेखीकन भए पनि मलाई धेरैRead More…
कथा : एक्लोपन / माधव विडारी
बाथरुमबाट निस्केर चिया बनाउँदै थिए, अचानक मोबाइलको रिङटोन बज्यो । चार दिनपछि मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो । चार दिन अगाडि फुपूको नाति आउँदा घर बिर्सेर, लोकेसन सोध्न फोन गरेथ्यो । छोरालेRead More…
कथा : सपनाको समाधि / सरोज कटुवाल
असङ्ख्य सपनाहरू हृदयकै कन्तुरमा थुनेर एउटा व्यग्र भोकसहित राजधानी छिरेको दुई महिना चल्दै थियो । यसर्थ राजधानीसँग सामान्य चिनाजानी हुँदै थियो । हरेक बिहान ५ बजे उठेर भाषाको कक्षामा जाने र फर्कनेRead More…
कथा : जात्रा कसको / देवकी केसी
सहर यतिबेला गाईजात्रा पर्वले तातेको देखिन्थ्यो । सहरका चोक, गल्ली बजार जताततै गाईका मुकुण्डाहरूको प्रशस्त बिक्री भइरहेको थियो । सहरका छाडा गाईहरू भने आफ्नै अनुहारको मखुन्डोहरू किनबेच गर्ने मान्छेहको भीड देखेर झनैRead More…
कथा : धरौटीमा नागरिकता / समिना खनाल ‘पृथा’
चुच्चो नाक, टोपीले व्यस्तताको परिचय दिएको थियो, बीचमा फाटेको टाल्न नभ्याएको, वातावरण उसैको सापेक्ष थियो । टम्म बादल लागेर पानी झर्ला झैँ तर झर्न नभ्याएको आकाश चुहिन ठिक्क थियो । ऊ जिल्लाRead More…
कथा : उपहार / महेशकुमार वाग्ले
विद्यालय प्राङ्गणमा लामबद्ध विद्यार्थीहरूले सरस्वती वन्दनापछि राष्ट्रिय गान गाउँदै थिए । एक्कासि चौकिदारले विद्यालयको ठूलो फलामे ढोका खोलिदिए । मन्त्री शिक्षाधर शाक्यको आगमन भएको रहेछ । विद्यालय समय सुरु हुनासाथ प्राङ्गणमा एक्कासि Read More…